eNasha.com - निरुता अब मुम्बै जाने
केही समयअघिसम्म नम्बर एक नायिकाका रुपमा परिचित निरुता सिंहसँग अहिले गिनेचुनेका चलचित्र मात्र छन् । उनीसँग अहिले तुलसी घिमिरेको 'देश' बाहेक अन्य चलचित्र छैनन् । यसअघि उनको एउटै मात्र चलचित्र 'डर'को सम्पूर्ण काम सकिइसकेको छ । 'देश' को काम सकिइसकेपछि उनी अब मुम्बई जाने भएकी छिन् ।
इनशाडटकमसँग 'देश'को सुटिङस्थलमा कुरा गर्दै भनिन्- "अभिनयका लागि चाहिँ म जान लागेकी होइन ।" त्यसो भए उनी केका लागि मुम्बई जाँदै छिन् त ? यो प्रश्न तपाइँको मनमा पनि उठिरहेको छ भने त्यो प्रसङ्गमा छिर्नुअघि तपाइँहरुलाई एउटा जानकारी चाहिँ दिइहालौँ ।
'देश'मा एउटी प्रखर नायिकाको रुपमा उनलाई उभ्याइएको छ । तर उनी त्यत्तिमा मात्र सन्तुष्ट भने छैनन् । सुटिङका अवधिमा उनले प्रायः कला निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । (नाम कसको आउँछ, त्यो चाहिँ पछि नै थाहा होला ।) सुटिङका बेला चाहिने सरसामानको सूचि बनाउने, तिनलाई क्यामेराको फ्रेममा आउने तरिकाले मिलाउने आदि काम उनैले गर्दै आइरहेकी छिन् । (तश्वीर हेर्नुहोस् ।)
"मलाई पहिलेदेखि नै 'इन्टेरियर डिजाइन'मा निकै रुचि थियो । यही रुचिका कारण तुलसी दाइका धेरै सिनेमाहरुमा मैले यस्ता सानातिना सबै काम गर्दै आइरहेकी छु", मुम्बई जाने कारण खोतल्दै उनले भनिन्- "अब यही विषयमा आधिकारिक ज्ञान लिने विचारमा छु ।" यो विषयमा ६ महिने शिक्षा दिइँदै आएकाले आफ्नो कामलाई खासै असर नपर्ने उनले बताएकी छिन् ।
हुन पनि उनको डिजाइनमा रुचि कस्तो रहेछ भने, (मैले आफ्नै आँखाले देखेको) अव्यवस्थित रहेका मयूरका प्वाँखहरुलाई उनले निकै राम्रो 'लुक' दिन सफल भइन् । अर्को एक दिनको सुटिङमा उनको आफन्तको घरमा त्यत्तिकै रहेका काठका खरायोहरुलाई घाँस हालिदिएर वास्तविक नै हुन् कि भन्ने भ्रम पैदा गर्न सफल भइन् ।
उनको यो रुचि फूर्सदिला दिनमा आम्दानीकै श्रोत पो बन्छ कि !
हल्ला अभिनेत्री अभिनेता रिलिज प्रविधि सेक्स सेलेब्रिटी समारोह सुटिङ पेज थ्री